မြန်မာ့ဂဇက် အယ်ဒီတာ့သင်ပုန်း – အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Contributor, Columnist » မြန်မာ့ဂဇက် အယ်ဒီတာ့သင်ပုန်း – အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁
မြန်မာ့ဂဇက် အယ်ဒီတာ့သင်ပုန်း – အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁
Posted by kai on Oct 13, 2021 in Contributor, Columnist, Myanmar Gazette |0comments
လက်သုံးချောင်းထောင်တော်လှန်ရေးစခဲ့သူမှာ စူဇန်းကောလင်းစ် ရေးသားသော The Hunger Games Trilogy ဝတ္တုကိုရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးသည့် ဇတ်ကောင်ဆယ်ကျော်သက် ကက်နစ်စ်အဲဗာဒင်းန်အမည်ရ Gen Z အမျိုးသမီးငယ်ဖြစ်သည်။ ညာဖက်လက်၏လက်သုံးချောင်းကိုပူး၍ နမ်းပြီးထောင်ပြသောဟန်ကို ပြင်သစ်တော်လှန်ရေးအမှတ်အသား လွတ်လပ်ခြင်း၊ညီမျှခြင်း၊သွေးစည်းချစ်ကြည်ခြင်းတို့ပေါင်းထည့်ယူ၍ ၂၀၁၄ထိုင်းစစ်အစိုးရအာဏာသိမ်းခြင်းကို ဆန္ဒပြရာ၌သုံးခဲ့ကြသည်။ ဟောင်ကောင်မှ ၂၀၁၄နှင့် ၂၀၁၉-၂၀ ဆန္ဒပြလှုပ်ရှားမှုများတွင်လည်း အသုံးပြုခဲ့ပြီး ၂၀၂၁တွင် မြန်မာတို့လက်ပေါ်ရောက်ခဲ့ခြင်းပါ။
ဂရိဒဏ္ဍာရီကို အခြေခံထားသော စာရေးဆရာ၏ဇတ်ကွန့်မြူးမှုတို့သည် တခါတရံ တကယ့်အဖြစ်တို့ကိုလွှမ်းမိုးသည်လည်းရှိ၏။ တကယ့်အဖြစ်တို့က ပို၍ဆန်းကြယ်သည်လည်းဖြစ်၏။
ဇတ်လမ်း၃တွဲပါ အဆိုပါရုပ်ရှင်သည် ခရိုင်အသီးသီး၏ အကောင်းဆုံးလူငယ်များကို အချင်းချင်းသတ်ဖြတ်စေကာ ခေါင်းဆောင်ညွှန့်တုံးစေရင်း အာဏာကို ၇၅နှစ် ဆုပ်ကိုင်ထားနိုင်သော သမ္မတစနိုး၏ ဂိမ်းကစားကွက်ဖြင့် အခြေတည်သည်။ အချင်းချင်း သတ်ဖြတ်နေကြရင်း သူမ၏မဟာမိတ်တဦးအသတ်ခံလိုက်ရသည်ကို ထိခိုက်ခံစားလိုက်ရသော ကက်နစ်စ်သည် ကစားကွက်၏ မူလရည်ရွယ်ရင်းမှခွဲထွက်လျှက် လက်သုံးချောင်းထောင်ပြရင်း ဆိုင်ရာခရိုင်အသီးသီး၏ တော်လှန်ရေးစိတ်ဓာတ်ကို လှုပ်နှိုးလိုက်သည်။ Mockingjay တေးမြုံငှက်သင်္ကေတဖြင့် တော်လှန်ရေးသမားဖြစ်လာသည်။ တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်သမ္မတကွိုင်မှ ပရိုပဂန်ဒါ စိတ်ဓာတ်စစ်ဆင်ရေးရုပ်ပြအဖြစ်ကက်နစ်စ်အား အသုံးချရင်း တော်လှန်ရေးအင်အားစုခဲ့ကြသည်။ ကလေးနှင့်အမျိုးသမီးများရှိနေသော ဆေးရုံကို သမ္မတစနိုး၏လေယာဥ်များဗုံးကြဲလိုက်သောအခါ ကက်နစ်စ်၏ စကားတခွန်းမှာစိတ်တက်ကြွဖွယ်ရာပါ။If We Burn, You Burn With Us. ငါတို့လောင်ကျွမ်းရင် မင်းလည်းမီးဟုန်းဟုန်းတောက်စေရမယ် ဆိုပါစို့။
တော်လှန်ရေးသမားတို့သည် နိုင်ငံ၏စွမ်းအင်/လျှပ်စစ်ထုတ်ရာရေကာတာကြီးကိုလည်း ဖေါက်ခွဲဖျက်ဆီးပစ်သည်။ သမ္မတရုံးစိုက်ရာမြို့တော်သို့ဝင်၍အိမ်တော်ရှိသမ္မတကိုလုပ်ကြံရန်ကြိုးစားချိန်ဝယ် အခြေအနေတို့ ပြောင်းပြန်လန်ခဲ့လေ၏။ ဇတ်သိမ်းတွင် တေးမြုံငှက်၏မြှားချက်သည် သမ္မတစနိုး၏နှလုံးသားကိုထိမှန် အသက်ကိုနှုတ်သိမ်းခဲ့သည်ကားမဟုတ်။
စက်တင်ဘာလ ၂၁ရက်နေ့ ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံမိန့်ခွန်းတွင် ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှုးချုပ်က အာဖဂန်နစ္စတန်၊ အီသီယိုးပီးယား၊ မြန်မာနှင့် ဆီးရီးယားတို့၏ ငြိမ်းချမ်းတည်ငြိမ်ရေးတို့မှာ ဝေးလွင့်အိပ်မက်အဖြစ်သာ ကျန်ရှိနေဦးမည်ဟု ပြောခဲ့သည်။ ကမ္ဘာ/ကုလသမဂ္ဂတို့အတွက်လည်း ငွေကုန်ကြေးကျ အဖြေရှာမရခေါင်းခဲနေသော ပြဿနာနိုင်ငံများဖြစ်ကြပါ၏။ လက်နက်အင်အားဖြင့် နိုင်ငံရေးအာဏာကိုဆုပ်ကိုင်လုယူသူများကြောင့် ဒုဗ္ဘိက္ခန္တရကပ်၊ သတ္တန္တရကပ်ကပ်ဆိုက်နေကြခြင်းဖြစ်၏။ ကိုဗစ်ဘေး ရောဂန္တရကပ်ပါထည့်တွက်လျှင် ကပ်သုံးပါးစုံကြလေပြီ။
အာဖဂန်နစ္စတန်နှင့် ဆီးရီးယားသည် ကမ္ဘာ့စစ်အင်အားကြီးစူပါပါဝါတို့မှ တိုက်ရိုက်စွက်ဖက် စစ်ရေးအကူပေးတပ်စေလွှတ်ခြင်းများဖြစ်ပြီးနောက် တပြည်လုံးမွမွကျေ ပြည်ပစစ်အင်အားပါသည့် စစ်ကြီးများဖြစ်လေရာ လက်ရှိမြန်မာ့အခြေအနေနှင့် လုံးဝမတူ။ လူ၆သိန်းမျှဆုံးရှုံးထားသည့်ဆီးရီးယားစစ်သည် မတ်လ ၂၀၁၁မှစ၍ ယခုထိမပြီးပြတ်သေး။ လူ၂သိန်းဝန်းကျင်ကျဆုံးသေကြေထားသော အာဖဂန်စစ်သည် ၂၀၀၁ အောက်တိုဘာမှစ၍ ၂၀၂၁ သြဂုတ်တွင် တဖြတ်အပြီးသတ်ထား၏။ ပြည်ပစစ်အင်အားကြီးတိုက်ရိုက်ဝင်စွက်ဖက်ခြင်းမရှိ အရပ်သား/စစ်သား အာဏာပြိုင်၊ လူမျိုးစုအခြေပြုဖက်ဒရယ်စနစ်သွားချင်ကြသည့်ရည်မှန်းချက်ဆင်ကြသည်မှာ အီသီယိုးပီးယားနှင့်မြန်မာဖြစ်သည်။ တိုက်ဆိုင်လှစွာ ဝါစိမ်းနီသုံးရောင်ခြယ်တွင် ကြယ်အလယ်ထားခြင်းအလံသဏ္ဍန်ပင် တူနေပါသတတ်။
“အာဖရိကရဲ့ ဦးချို -အီသီးယိုးပီးယား”
အာဖရိကတိုက်၏ လူဦးရေဒုတိယအများဆုံး ( လူ၁၁၅သန်း/GDP $၁၀၇..၆ဘီလီယံ) ရှိနိုင်ငံတွင်း ပြည်တွင်းပဋိပက္ခ-စစ်ပွဲများဖြစ်နေသည်။
အီသီးယိုးပီးယန်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးစစ်တပ် ENDF နောက်ခံရှိသည့် ၂၀၁၈ ရွေးကောက်တင်မြောက်ခံ အီသီယိုးပီးယားဝန်ကြီးချုပ် အာဘီးယ်အမက်၊ အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံအား ၁၉၉၁ မှ ၂၀၂၀အထိလွှမ်းမိုးအုပ်ချုပ်ထားခဲ့သော တီဂရေးပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦးTPLF၊ အီသီယိုးပီးယားမူလနိုင်ငံကြီးမှခွဲထွက် ၁၉၉၃တွင် အပြီးလွတ်လပ်ရေးယူထားသည့် အီရီထရီးယားနိုင်ငံ သုံးပွင့်ဆိုင်ကို အကျဥ်းချုံးရေးပါမည်။ အနှစ်၂၀ကြာ ကုန်းတွင်းပိတ်အီသီယိုးပီးယားနှင့် ပင်လယ်ထွက်ပေါက်အီရီထရီးယားနိုင်ငံစစ်ပွဲကို နယ်စပ်မြို့လွှဲပေး ပဋိဉာဥ်စာချုပ်ချုပ်အဆုံးသတ်နိုင်မှုဖြင့် ဝန်ကြီးချုပ်အာဘီးယ်သည် ၂၀၁၉ခုငြိမ်းချမ်းရေးနိုဗယ်ဆုရခဲ့သည်။ သူ၏ပါးနပ်စွာအာဏာဖြန့်ကျက် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအပြင်းအထန်စွမ်းဆောင်နိုင်မှုများဖြင့် မူလ TPLF သည်လည်း နှစ်၃၀မျှရထားသည့်အာဏာလျှော့လက်လွတ်ရသည်။ ၂၀၂၀တွင်ပြုလုပ်ရမည့် ရွေးကောက်ပွဲကို ကိုဗစ်ကြောင့်ဟုဆိုကာ အာဏာရအစိုးရကဆိုင်းငံ့ခဲ့ရာမှ စင်ပြိုင်လုပ်သော ရွေးကောက်ပွဲများဖြင့် TPLF နှင့် အာဘီးယ်အစိုးရတို့ ဆက်ဆံရေးအလွန်တင်းမာလာခဲ့သည်။ ၂၀၂၀ နိုဝင်ဘာ ၄ရက်တွင် တီဂရေးဒေသရှိ TPLF ဒေသခံလက်နက်ကိုင်အင်အားစုများအပေါ် စစ်ရေးထိုးစစ်ကြီးဆင်နွှဲချေမှုန်းရန် အာဘီးယ်မှ အမိန့်ထုတ်ခဲ့ကာ စစ်မီးကြီးတောက်လောင်လာခြင်းဖြစ်သည်။
၂၀၂၁ ဇွန်လတွင်ရွေးကောက်ပွဲလုပ်၊ ဇူလိုင်တွင်မဲရလဒ်ကျေညာ၍ မဲအပြတ်အသတ်အနိုင်ရသည်ဆိုကာ ယခုအောက်တိုဘာ၄ရက်နေ့တွင်ကျမ်းကျိန်ပြီးနောက် အာဘီးယ်သည်နောင်၅နှစ်သက်တမ်းဝန်ကြီးချုပ်ပြန်ဖြစ်လာပေပြီ။ TPLFခေါင်းဆောင် ဒီဘရတ်ရှင်းနှင့် လက်ရှိဝန်ကြီးချုပ် အာဘီးယ်တို့၏အာဏာလုစစ်ပွဲကြီးတွင် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံအီရီထရီးယား၏စစ်တပ် EDF ကပါ ဝင်ကူနေငြား မပြီးပြတ်။ တဖက်စစ်အင်အား ၂သိန်းဝန်းကျင်ဖြင့် အပြန်အလှန်ဖြစ်နေသော ၁၁လကျော်ကြာပြည်တွင်းစစ်ပွဲတွင် စာရင်းအရ အီသီယိုးပီးယားအစိုးရတပ်မှ ၃ထောင်ကျော်နှင့် တီဂရေးဖက်မှ၅၆၀၀ကျဆုံးခဲ့ကြပြီးဖြစ်သည်၊ ယခုမိုးအကုန်တွင် ထိုးစစ်ကြီးများစလိုက်ပြန်ပါပြီ။ မည်မျှကြာ၍မည်သူနိုင်မည်မသိ။ လက်ရှိရှုံးနေသူများမှာ စစ်ပြေးအီသီယိုးပီးယန်း၂သန်းနီးပါးနှင့် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီလိုအပ်နေသော လူ၅သန်းကျော်။ ကုလအကူအညီတွေဝင်ပေးခွင့်ပေးဖို့ရန် အီသီယိုးပီးယားအစိုးရကို ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှုးချုပ်က တိုက်တွန်းနေချိန်ပါ။ ရရှိထားသောငြိမ်းချမ်း‌ရေးနိုဗယ်ဆုပြန်ရုတ်သိမ်းရန် တောင်းဆိုခံထားရသော ဝန်ကြီးချုပ်အာဘီးယ်သည် စက်တင်ဘာလကုန်က ကုလသမဂ္ဂအရာရှိကြီး၇ဦးကို တိုင်းပြည်မှ ၇၂နာရီအတွင်ထွက်သွားရန် နှင်ထုတ်ခြင်းလည်း ပြုခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ထုံးစံအတိုင်း ကမ္ဘာ့ပုလိပ်ကြီးအမေရိကားမှ စေ့စပ်ညှိနှိုင်းအဖြေရှာရန်တိုက်တွန်းနေပြီး ပျက်ကွက်ကြပါလျင် စစ်တိုက်နေသည့်အဖွဲ့များအားလုံးအပေါ် နာကျင်စေရမည့်ဆန်ရှင် ပိတ်ဆို့ဒဏ်ခတ်ရပါမည်ဟု ခြိမ်းခြောက်ပြောဆိုထားပါသတည်း။
ဗြိတိသျှတို့ပေးခဲ့သည့်မြေပုံနှင့် ၁၉၄၈ လွတ်လပ်ရေးရခဲ့သောမြန်မာပြည်သည် တိုင်းပြည်နုနုခေတ်ကထဲက စစ်မုန်တိုင်းတို့ထန်ခဲ့၏။ လူမျိုးစုများမှာ အမည်နာမအခေါ်၊ ပိုင်ဆိုင်နယ်နမိတ်၊ သာသနာကွဲပြားခြင်းအကြောင်းပြု အချင်းချင်းပဋိပက္ခတို့ကို မထိန်းနိုင်။ အတိုင်းအတာတခုထိန်းနိုင်ချိန်ဝယ် အာဏာသိမ်းသူ မြန်မာ့တပ်မတော်၏ အကြီးအကဲသည် ငွေမက်သည့်စစ်အာဏာရှင်ဖြစ်သွားလေရာ တိုင်းပြည်ကြမ္မာငင်သည်သာဆိုရမည်။ ၁၉၈၈အရေးတော်ပုံကြီးဆုလာဘ်အဖြစ် ၂၀၁၀ရွေးကောက်ပွဲဖြင့် ဒီမိုကရေစီအစိုးရတက်လာချိန်ဝယ် မြန်မာတို့ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများတန်းတူဒီမိုကရေစီအသီးအပွင့်အချို့မြည်းစမ်းလာနိုင်ပါ၏။ ၂၀၁၅ရွေးကောက်ခံ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အစိုးရသည် အီသီယိုးပီးယားနှင့်နှိုင်းလျှင် ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဗယ်ဆုရှင်အာဘီးယ်ထက်ပင် အစိုးရသက်တမ်း ၅နှစ်ဖြင့် အချိန်ပိုရခဲ့ဖူးသည်။ နောင်အာဏာမသိမ်းနိုင်အောင် တားဆီးပြင်ဆင်ခြင်းမပြုနိုင်ခဲ့။ NLD ပင် ၂၀၂၀တွင် ထပ်မံရွေးကောက်ခံရပြန်သော် တပ်မတော်သည် ခေတ်ပြိုင် အာဘီးယ်၏အီသီယိုးပီးယားနှင့် ထရမ့်၏အမေရိကားကိုကောင်းစွာကြည့်၍ မဟာဗျူဟာချလုပ်လိုက်ပုံပေါ်သည်။ ဆိုရှယ်မီဒီယာနှင့် နိုင်ငံခြားရောက်နေသည့် မြန်မာသန်းဆယ်ချီတို့အင်အားကို လျှော့တွက်လိုက်ပုံလည်းပေါ်သည်။ သို့ဖြင့် နွေဦးတော်လှန်ရေးသည် ၈၈အရေးတော်ပုံနှင့်ဆင်ဆင်ကြား-မတူကွဲပြားဖြစ်လာသည်။ အာဏာသိမ်းခံရပြီး ၇လကျော်ကြာ စက်တင်ဘာ ၇ရက်နေ့တွင် NUG မှ D-Day ဒီနေ့ဟုကျေညာပြီးနောက် လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲများစိတ်စိတ်ဖြစ်လာသည်။
NUCC နှင့် NUG ဘက်တွင် တိုင်းရင်းသား EAOs များအကုန်မပါ(သေး)။ ဖြစ်စဥ်များအရကြည့်လျှင် KNLA, KNDF, KIA, CNA တို့သည်သာ PDF များနှင့်ပူးတွဲစစ်ဆင်ရေးများဆင်နွှဲရပ်တည်နေခြင်းဖြစ်၏။ အခွင့်အရေးရလျှင်သီးခြားလွတ်လပ်သောနိုင်ငံတည်ထောင်လိုဟန်ရှိသည့် ရခိုင်တို့၏ AA နှင့် ဝတို့၏ UWSAသည် အခက်/အချက်ယူ၍ငွေအင်အား/လူအင်အားတိုးတွန်းဖြည့်နေဟန်လည်းရှိသည်။
အီသီယိုးပီးယားနှင့်မတူသည်/တူသည်များစွာရှိပါ၏။ EAOs အချို့၏ ရာစုနှစ်ဝက်ကျော်စစ်ရည်ဝနေသောအခြေအနေမတူ။ လူဦးရေသန်းထောင်ချီ ကမ္ဘာစီးပွားရေး ၂-၅ဝင်သော အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံဧရာမကြီးများကြားညပ်နေသည်မတူ။ ဘာသာတရားကြီးများပေါင်းစုံ ရောသမမွှေရှိနေသည်မတူ။ ဒီမိုကရေစီလိုလားသော လူထု၏ အခွင့်အရေးရတိုင်းအသက်ရင်းကြိုးစားပုန်ကန်နေသည့် စိတ်အားတက်ကြွမှုမတူ။ သံတမန်ရေးအားဖြင့် NUG သည်ခြေလှမ်းဦးလာနေသည်ကိုတွေ့ရမည်။ ချိုင်းနားနှင့် အာဆီယံသည်ပင် ဘက်ယိမ်းလာသည်ကိုခံစား၍ရသည်။ အမေရိကားနှင့်ဥရောပတို့၏ စမတ်ဆန်ရှင်များလည်းချပြီးဖြစ်သည်။ အတိုင်းအတာအလိုက်အသိအမှတ်လည်း ပြုကြသည်။
တိုင်းပြည်၏စီးပွားရေးသည် ရစရာမရှိပေ။ ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏နောက်ဆုံးစစ်တမ်းအရ ၂၀၂၁တွင်မြန်မာ့စီးပွားရေးအနှုတ်၁၈%တွင် ကိုဗစ်၏တတိယလှိုင်း၌ အာဏာသိမ်းခြင်းထပ်ဆောင်းခြင်းဖြင့် လက်ရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးများ၏ ၅၂% သာနောက်လအထိတောင့်ခံနိုင်မည်ဟု ယုံကြည်ချက်ရှိကြောင်းဆိုနေသည့်အခြေအနေပါ။ ဒေါ်လာ-ကျပ်ငွေကြေးလဲနှုန်း ယခုရေးချိန်တွင် ၂၀၀၀ဝန်းကျင်။
ဤအတိုင်းသွားပါလျှင် လူထု၏အငတ်ဘေးသည် နောက်နှစ်တွင်အဟုန်မြှင့်ဝင်လာနိုင်ခြေရှိပါသည်။ ဒေါ်လာငွေလဲနှုန်းလည်း ၁ဒေါ်လာ၃၀၀၀ကျပ်၏မြောက်ဖက်ဟုတွက်ဆရ၏။ အဆိုပါ အငတ်ဘေးကပ်ကို စစ်ရေးကပ်ထပ်ဆောင်းရန်လည်းအကြောင်းများစွာရှိရာ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု သုံညနှင့် အငတ်ကြီးငတ်လျှက် ၂၀၂၂ ကိုဝင်သွားရမည်ပါ။
ဤဖြစ်ရပ်အလုံးစုံအတွက် ယာယီသမ္မတတာဝန်ယူထားသော ဦးမြင့်ဆွေနှင့် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယကတီခွန်မြတ်တို့တွင် တာဝန်အပြည့်ရှိသည်။ သမိုင်းတရားခံမဖြစ်လိုလျှင် ၂၀၀၈ခြေဥ ပုဒ်မ ၄၁၀အရ အရေးပေါ်အခြေအနေကြေညာထားခြင်းကို ဖျက်သိမ်းသင့်သည်။ (သို့မဟုတ်) ၄၂၁ (ခ) အရ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်မှ ၆လသက်တမ်းတိုးပေးရန်တင်ပြလာပါကလည်း သက်တမ်းမတိုးပေးပဲ ရပ်ဆိုင်းလိုက်သင့်သည်။
နာဇီ-ဂျာမဏီခေတ်ကဲ့သို့ လမ်းခရီးတွင်ဖမ်းစစ် အိမ်တွင်းဝရမ်း/တရားရုံးစာမရှိဝင်စီး စစ်ချင်သလိုစစ် ဖြစ်ချင်သလိုဖြစ်နေကြသော လက်ရှိစစ်အုပ်ချုပ်ရေး၏ လူထုအပေါ်ရမ်းကားအခြေအနေများကို နောင်တချိန်တွင် ကမ္ဘာသိရန် မြန်မာ့မျိုးဆက်တို့သိရန် ချန်ရစ်ခဲ့သင့်လှသည်။ ထူးခြားမျက်မြင်သမျှကိုမှတ်တမ်းတင်ဗီဒီယို/ဓာတ်ပုံရိုက်ကူး သိမ်းထားကြလိုသည်။ ဖိုင်တို့ကိုဆိုင်ရာဆိုရှယ်မီဒီယာများပေါ်တင်ပါလျှင် ကိုယ်တိုင်၌အန္တရာယ်ရှိပါလျှင် ယခုခေတ်တွင် တိမ်(Cloud)ပေါ်တင်သိမ်းရန်မခက်သလို ကမ္ဘာသိနိုင်ငံခြားအစိုးရတို့၏ NHK, BBC, VOA ကဲ့သို့မီဒီယာကြီးများထံသို့လည်းစိတ်ချယုံကြည်စွာ ပို့ထားနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါမီဒီယာကြီးများတွင် လျှို့ဝှက်ထားလက်ခံပေးနိုင်သည့် အင်တာနက်လင်ခ့်များရှိပါ၏။ မိမိ၏ဒိုင်ယာရီမှတ်တိုင်မှာ မြန်မာ့သမိုင်းမှတ်တမ်းအစိတ်အပိုင်းအဖြစ်ကျန်ရစ်နိုင်သလို အချိန်ကာလတခုတွင် ဆိုင်ရာချီးမြှင့်ငွေအမြောက်အများရနိုင်သည့် ဆု ဂုဏ်ပြုခြင်းများလည်းရနိုင်ရှိခြေရှိပါ၏။
အမေရိကပြည်ထောင်စု၏နိုင်ငံတော်တံဆိပ်မှာ လင်းယုန်၏ညာဖက်တွင်သံလွင်ခက်နှင့်ဘယ်တွင်မြှားကိုဆုပ်ကိုင်ထားဟန်ဖြစ်၏။ ကြာရှည်ခံငြိမ်းချမ်းရေးဟူသည် အင်အားပါဝါမပြ/မပါပဲ မရ။
UN,US,EU,QUAD,ASEAN နှင့် CHတို့သည် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးသာ ဇောက်ချပြောနေသည်ကို သတိပြုမိကြပါလိ့မ်မည်။ သူတို့သည် အတွေ့အကြုံရှိပြီးချည်းသာ။
စစ်ရေးဝင်စွက်လေ့ရှိသော သမ္မတဘိုင်ဒင်အုပ်ချုပ်ရေး၏အမေရိကားသည်လည်း စစ်ရေးအရဝင်ပေးမည်မဟုတ်ဟူသည့် နိုင်ငံခြားရေးပေါ်လစီကို အတိအလင်းဆိုပြီးဖြစ်ပါ၏။ နိုင်ငံခြား၏စစ်ရေးအကူအညီမပါပဲ ဤပွဲပြတ်ရန်အကြောင်းမရှိ။
AAPP မှတ်တမ်းအရ အာဏာလုစစ်အုပ်စုလက်ချက်ဖြင့် ကြွေလွင့်ခဲ့သူတို့ အောက်တိုဘာ၁၁ ရက်နေ့အထိ ၁၁၆၇ဦးဖြစ်၏။ ၇၂၁၉ဦးအားဖမ်းဆီးထားသည်။ လက်နက်ကိုင်တော်လှန်သူတို့၏လက်ချက်ဖြင့် ကျဆုံးသူစစ်သားဦးရေမှာ ထို၂ဆမကရှိမည်ထင်ပါသည်။ စစ်သား စစ်တိုက်၍သေသည်မှာမဆန်းငြား တာဝန်ယူတာဝန်ခံမှုနည်းလှသည့် မြန်မာတပ်မတော်အောက် ကျန်ရစ်သူမိသားစုများဘဝမည်သို့နည်း တွေးကြပါလေ။
ယခုသွားနေသောလမ်းကြည့်ရသည်မှာ လုပ်ရင်းလှုပ်ရင်း နှစ်ဖက်လုံးချောင်ပိတ်မိနေသည့်အခြေ။ PDF တို့ EAOs နှင့်ပေါင်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဆင်နွဲလေဦး လက်ရှိနှစ်၇၀ကျော်စစ်တိုက်စားလာသည့်စစ်တပ်မှ PDF နေရာရောက်ကာ ပျောက်ကြားစစ်များမဆင်နွှဲဟု ထင်မြင်ယူဆနေသူများ ရှိနေသလားမပြောတတ်။
စားပွဲပေါ်တွင် စကားပြောလိုလျှင် နှစ်ဖက်အင်အားချိန်ခွင်လျှာမျှတနေရမည်။ နှစ်ဖက်အင်အားချိန်ခွင်လျှာမျှစေရန် လက်နက်ကိုင်ရသလို ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြခြင်းကိုလည်း စဥ်ဆက်မပြတ်ဖေါ်ဆောင်နေရသည်။ သို့မှသာ မဟာအင်အားကြီးတရပ်/တဖွဲ့က ကြားဝင် ခုံသမာဓိလုပ်ဝင်စွက်လာသည်။ ထိုအခြေအနေကိုရောက်အောင် ဦးတည်ချက်ထားရွေ့ယူခြင်းကသာ လူသားမြို့ပြနှင့်နိုင်ငံတော်အတွက် အကောင်းဆုံးရယ်ပါ။
စစ်နှင့်ပတ်သက်၍ ဗုဒ္ဓအဆုံးအမကား မည်သို့နည်း?
ပဋိကတ်တော်အဆိုအရ ရောဟိနီမြစ်ရေအကြောင်းပြု စစ်ဆင်နွှဲရန်ပြင်ဆင်နေသော နှစ်ဖက်မြစ်ကမ်းမှ “သက္ကတိုင်း” နှင့်“ကောလိယတိုင်း”စစ်တပ်ကြီးကြား ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားကြွ၍ သုတ္တန်တခုနှင့်ဇာတ်တော်ငါးခုကိုဟောကြား ငြိမ်းချမ်းစေခဲ့သည်။ မလိုမုန်းထားသူတို့ မဖြိုခွဲနိုင်အောင် ကိုယ်စိတ်နှစ်ရပ် ညီညွတ်စွာ ​နေသင့်ကြောင်း ကောင်းစွာဆုံးမသည့် “ရုက္ခဓမ္မဇာတ်တော်”၊ ငြင်းခုံခြင်းသည် အကျိုးမရှိ၊ မိမိတို့ငြင်းခုံခြင်းသည် သူတစ်ပါးတို့ စားပေါက်ဖြစ်ကြောင်း ကောင်းစွာ ဆုံးမသည့် “ဝဋ္ဋကဇာတ်တော်”၊ အားငယ်သူကို မထီမဲ့မြင် မပြုသင့်ကြောင်း ခွန်အားနည်းသူကို အထင်သေးမိက သူ၏ထက်မြက်သော ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ကို အသုံးချနိုင်သောအခါ၊ မထီမဲ့မြင်ပြုမိသော အင်အားကြီးသူတို့ ပျက်စီးရကြောင်း ကောင်းစွာဆုံးမသည့် “လဋုကိကဇာတ်တော်”၊ မြစ်ကမ်းနှစ်ဘက်မှ လယ်သမားတို့ ငြင်းခုံမှု ၊ ဆဲရေးမှုတို့ကို မစိစစ်ဘဲ စစ်ပြင်မိကြသည်မှာ အမှိုက်ကစ၍ ပြာသာဒ်မီးလောင်ဆိုသကဲ့သို့ လယ်သမားရန်ပွဲဟာ နှစ်ပြည်ထောင်စစ်ပွဲ မဖြစ်သင့်ကြောင်း ကောင်းစွာဆုံးမသည့် “ပထဝီဥန္ဒြိယဇာတ်တော်”၊ အချင်းချင်းရန်ဖြစ်ခြင်းသည် သူတစ်ပါး၏အကျိုးစီးပွားဖြစ်ဖို့သာတည်းဟု ဆုံးမသော “ဖန္ဒနဇာတ်တော်”၊ ညီညွတ်ရေးနည်းလမ်းပြမိမိကိုယ်ကို ဆုံးမကြဖို့ လမ်းညွှန်တရားဖြစ်သည့် “အတ္တဒဏ္ဍသုတ်တော်” တို့ဖြစ်သည်။ မြတ်စွာဘုရားဟောကြားချက်အပြီးဝယ် ကမ်းနှစ်ဖက်က နှစ်ပြည်ထောင်မင်းနဲ့စစ်တပ်ကြီးတို့ဟာ ကိုင်စွဲထားကြတဲ့ လက်နက်များကို ရောဟိနီမြစ်ထဲသို့ ပစ်ချမျှောလိုက်ကြပြီး စစ်ပွဲကိုရပ်၍ ငြိမ်းချမ်းရေးရခဲ့ပါသည်။ ဗုဒ္ဓသာသနာ-အဆုံးအမနှင့် သာသနာ့ဝန်ထမ်းတို့ရပ်တည်မှုသည် လူမျိုးမတူ/လူမျိုးစုတူကြားတွင် ဖမ်းထိုးမီးမဖြစ်။ ငြိမ်းအေးရာသာဖြစ်ခဲ့ဖူးသည်။ ယခုမူ.. သို့သော်……